Vatyairi vemarori The Indian Face yemweya yemahara - THE INDIAN FACE
Born to Ultratrail Muchena / Mutsvuku
Born to Ultratrail Muchena / Mutsvuku 40.00 €
Born to Ultratrail Grey / Bhuruu
Born to Ultratrail Grey / Bhuruu 40.00 €
Born to Snowboard Ichena / Pink / dema
Born to Snowboard Ichena / Pink / dema 40.00 €
Born to Snowboard Ichena / Dema / Bhurawu
Born to Snowboard Ichena / Dema / Bhurawu 40.00 €
Born to Snowboard Nhema
Born to Snowboard Nhema 40.00 €
Born to Fly Dema / Grey
Born to Fly Dema / Grey 40.00 €
Born to Sail Muchena / Mutsvuku
Born to Sail Muchena / Mutsvuku 40.00 €
Born to Sail Bhuruu / Yero / Yera
Born to Sail Bhuruu / Yero / Yera 40.00 €
Born to Paddle Dema / Grey
Born to Paddle Dema / Grey 40.00 €
Born to Bodyboard Dema / Grey
Born to Bodyboard Dema / Grey 40.00 €
Born to Run Green / Bhuruu
Born to Run Green / Bhuruu 40.00 €
Born to Run Grey / Bhuruu
Born to Run Grey / Bhuruu 40.00 €
Born to Skate Nhema
Born to Skate Nhema 40.00 €
Born to Skate Dzvuku uye dzakasviba
Born to Skate Dzvuku uye dzakasviba 40.00 €
Born to be Free Grey / Bhuruu
Born to be Free Grey / Bhuruu 40.00 €
Born to be Free Bhuruu / Yero / Yera
Born to be Free Bhuruu / Yero / Yera 40.00 €
Born to be Free Bhuruu / Dema
Born to be Free Bhuruu / Dema 40.00 €
Born to be Free Bhuruu / Chichena
Born to be Free Bhuruu / Chichena 40.00 €
Born to be Free Muchena / Green
Born to be Free Muchena / Green 40.00 €
Maodzanyemba White dema uye bhuruu
Maodzanyemba White dema uye bhuruu 44.95 €
TRUCKER BASEBALL CAPS YEVARUME NEVAKADZI
La cap Icho chimwe chezvinhu zvinoshandiswa zvakanyanya nemumhanyi wemazuva ano. Nhasi, makapisi chikamu chekupfeka kwemabasa mazhinji nevatambi, saka kune marudzi mazhinji emakopisi zvichienderana nezviitwa zvaunoita mazuva ese. Zvingangodaro, izvi zvinoenderana nekuti unopfeka here kapu yetiraki, kapu yemukomana, kapu diki, kapu yemukomana, kapu nhema, kapu chena, kapu yepasi, kapi tsvuku, kapu yekudhirowa, kana kapu yemitambo. nechero dhizaini kana kara iwe unogona kufungidzira .. Nemakapu nyika yemikana isingaite inovhurika!
Nenzira iyi, vazhinji, vanhu vazhinji pasirese vanoshandisa tsika ngowani zuva nezuva. Muchokwadi, iyo cap ndiyo imwe yezvinhu zvinoshandiswa zvakanyanya pasi, nekuti haina murume kana mukadzi kana zera musiyano. Nekudaro, ichokwadi kuti ngowani dzemitambo ndiwo makapeti ayo anonyanya kushandiswa mukubatsira kwavo uye kunyaradza. Mune ino kesi, hazvina basa kana iwe ukapfeka ngowani yekumhanya, kapi yebhasikoro kana imwe yeano ngano baseball cap, uye hazvina basa kana ukapfeka ngowani yemukomana, ngowani yemusikana, kana kana ukapfeka ngowani yemukomana, zvakakosha chinhu ndechekuti, kana iwe uri anoda zvemitambo uye iwe uchitungamira anoshanda ehupenyu, kune akawanda marudzi emakepesi anogona kuuya anobatsira kuzadzisa zvese zvako zvezuva nezuva zviitiko.
Nhoroondo kutaura, baseball nguwani yakazvimisikidza seimwe yeiyo hats yakanyanya echinyakare uye iconic munyika. Zvikurukuru, ngowani dze baseball dzakatanga nekwavo kuma 1860, apo iyo inonzi "chivakwa cheBrooklyn" chivharo chakabuda, ichikurudzira zvivharo zvemitambo zvakajairika. Uyu kapu ndiye tateguru ve baseball cap, sezvo zvaive zvisati zvaitika kusvika 1940 apo dhizaini yakachinjirwa kuti igadzire emazuva ano baseball cap atinoziva nhasi. Panguva iyoyo, iyo visor yeiyo cap yaive yakagadzirirwa kuchengetedza maziso emutambi, uye kubva ipapo zvichienda mberi, baseball cap dzakagadziriswa kuti dzigadzirise hunhu hwavo uye kuti zviite izvi zviputi zvakanyanya kubatsira pamutambo.
Imwe yeakagadziriswa enhoroondo iyo kapu yaive nayo ndeye trucker cap, inozivikanwawo seye grid cap kana kaputi yetiraki. Iyo trucker cap ndeye yakanyanya kunyanya uye inokwezva mhando yekepisi, inoshandiswa nevatambi vazhinji, vafambi uye nonconformist vakapindwa muropa nemadhorobha kubva kumativi ese epasi, vari vateveri vekupfeka ngowani dzetsika kwese kwavanoenda. Chinhu chinonakidza pamusoro pemakepisi aya ndechekuti vanomira pakuve muenzaniso wekopu yekudhirowa kana kapu ye logo. Izvi zvinoreva kuti iwo makapeti akakodzera kuratidzira kumberi imwe dhizaini kana logo inotsanangura munhu akapfeka ngowani yakataurwa, zvisinei kuti chivharo chitsvuku, kana chivharo nhema, kapu chena, kana kapu ye baseball. ruvara. Icho mhando che mesh cap iyo isina kugadzirwa zvizere nemachira sezvazviri, semuenzaniso, iyo classic baseball cap. Muchokwadi, iyo mesh cap ndiyo musiyano mukuru kwazvo uyo kaputi yetirori yakafananidzwa ne baseball cap. Mune ino kesi zvine basa zvishoma kana iri cap yemwana, one chivharo chemusikana kana a cap yemukomana, nekuti iyi modhi yemakapu haina kana murume kana murume musiyano wezera futi. Zvirokwazvo chivharo cherori ndeyemhando yepamusoro yema cap yemhando inowira mumapoka mazhinji: ngowani dzemitambo, ngowani dzemafashoni uye makapisi etsika, nekuti ndeimwe yemhando idzi dzechivharo.
En The Indian Face Unogona kuwana marori emakepisi, ngowani dzemafashoni, nguwani dzinomhanya uye ngowani dzemabhasikoro, uye mamwe akawanda marudzi emakopu. Kana iwe uchida kutenga zvinoenderana nemakepisi, yedu webhusaiti ndiyo yakanaka nzvimbo yekusarudza yako yaunofarira uye kutenga maheti online. Iwe unowana ese marudzi ese ekudhirowa makapu ane zviratidzo zvakawanda zvine chekuita neyako yaunofarira mitambo yakadai sekumhanyisa makepisi uye mabhasikoro emabhasiketi. Chinhu chakajairika uye chinonzwisisika ndechekuti yega yega yemhando dzakasiyana dzemakepisi anoshandiswa zvinoenderana nebasa ratichaita.
Kapu yako inotsanangura zvauri uye nehunhu hwaunotakura mukati. In The Indian Face Isu tinotsvaga kugadzira mhando dzakanakisa dzemakepisi uye ngowani dzemitambo mumusika, semuenzaniso chivharo chebhasikoro uye kapi inomhanya, nechinangwa chekupa vatengi vedu mukana wekutenga makapu pamhepo zvakanaka.
En The Indian Face gore rega rega isu tinomutsidzira kuunganidzwa kwedu kwe mitambo yemitambo kupa yakanakisa mhando nesarudzo dzakasiyana siyana. Mhando dzedu dzemakopu dzine kumberi kwekotoni uye mesh kumashure, uye inogadziriswa snapback kuvhara. Iwe uchaona kuti edu mafashoni makapu echinyakare akafuridzirwa nema80s uye 90s! Isu tinosanganisira, semuenzaniso, kapu inomhanya uye kapi yebhasikoro, uye zvakare chivharo chitsvuku nekopu nhema, pasina kusiya chivharo chena kana cap yekudhirowa, asi haizove chero kudhirowa, unenge uri mufananidzo unomiririra. yemutambo wawakaberekerwa kuita. Hatisi kungotengesa mesh cap… Yedu marori makapu anotumira yakachena uye yakaoma mutambo ine yakanakisa yakasarudzika maitiro.
Nemi, ndeapi mitambo yakazvarwa?
Tinopa hats zvine hunyanzvi zvakanyanya zvichienzaniswa nemamwe ese emusika, kwete chete yehunhu, kunyaradzwa uye chimiro chakapihwa nemitambo yedu yemakepesi. Takatarisa pakumutsa mweya wekutsamwa, tichisanganisa mune yega yega yemhando yedu yekepuru kudhirowa bheji inoenderana nemutambo waunofarira uye zvinoita kuti tinzwe takasununguka zvechokwadi. Makapeti edu haasi akapfava makapisi ... nyeredzi yedu chivharo, chivharo cherori, chiratidzo chemumhanyi anochipfeka.
Nekudaro, isu tinokwanisa kuendesa iyo yemitambo kunzwa mune yedu vasikana nguwani, vakomana nguwani uye mukomana makapisi. Izvo chete zvakanakisa, kune akanakisa: machipisi akagadzirwa iwe nemutambo unokukurudzira kuti urarame nechido.
Iwe uri anoda zvemitambo uye iwe unofarira kupfeka ngowani dzemafashoni?
Muchitoro chedu chepamhepo checaps unogona kuwana sarudzo yakanaka uye tenga nenzira yakasununguka, yakapusa uye yakachengeteka. Imwe yemabhenefiti akakurisa ekombi yetirori, yedu mutambo chivharo -kutengesa zvakanyanya, ndiko kunyaradzwa uye nyore kwekugadzirwa kwayo, chimiro uye zvigadzirwa. Isu takataura kuti dhizaini yemakorori makepu yakatorwa kubva kune yakasarudzika baseball cap, nekumwe kugadziridzwa kunoita kuti ive imwe yeanonyanya kufarirwa mafashoni nhasi Iwo mavhenekeri pane aya marudzi emakapeti akakombama, kunyangwe paine mamwe mamodheru emota-yemhando yemitambo makepisi ane mafirati. Zvakare, matiraki makepisi anouya mune yakawanda yakawanda mavara. Pane iyi modhi yemesh cap pane chivharo chitsvuku, chivharo chitema uye chivharo chena, zvese zvakagadzirwa nemwenje zvinhu.
Yedu marori kofia ane akawanda mabhenefiti pamusoro pemamwe ese emhando dzemakapu epamhepo aripo. Iwe unotsunga kupfeka kapu yemitambo futi? The Indian Face, uye kutaridzika mufashoni gore rese? Shanyira yedu online caps chitoro uye sarudza kapu yemusikana, kapu yemukomana kana kapu yemukomana iwe yaunoda!
VARUME BASEBALL TRUCKER CAPS
ari hats ivo vanopfuura zvinopfuura zvekushandisa zvemitambo. Nekufamba kwenguva uye shanduko yemafashoni asina kujairika uye fashoni yemitambo, zvakaratidzirwa kuti kuravira kwakatsamira kune zvipfeko zvemitambo zvinowirirana uye zvishongedzo zvinogona kushandiswa munzvimbo dzakasiyana, ndiko kuti, zvese muguta nemumunda, uye mune zveImba uye zvekunze zviitiko.
La cap yemurumeKunyanya, rave riri danho repamusoro uye chimwe chezvinhu zvinonyanya kubatsira. Tsika nyowani dzevatambi dzakavatungamira kufunga nezvavo zvipfeko neimwe nzira, kuisa pamberi pekunyaradza kusimudzira hupenyu hune hutano nekuvandudza maitiro emitambo senge kumhanya. Vanotsvaga iyo ngowani dzevarume Iwo ehunyanzvi uye epamusoro-mashandiro, achibvumidza kuchinjika mukufamba kwavo, kuchengetedza kwekupisa kwemuviri muzvinhu zvinofema uye nyaradzo, zvese panguva imwe chete. Chikamu chebasa redu mu The Indian Face, semitambo uye yemitambo yemitambo yemhando yepamusoro, ndeyekuzadzisa zvido zvevatengi vedu, uye nekupfuura zvavanotarisira pamwe nemidziyo yemitambo uye zvivharo zvemitambo zvinomutsa kushuva kwekunakidzwa uye mararamiro evasingaenderane nemadhorobha vakapindwa muropa.
Nyika yemakepisi yakafara kwazvo asi mu The Indian Face isu takanangana nekusimudzira ngowani dzemitambo yevarume seimwe yezvigadzirwa zvedu zvepamberi; Ndomumwe wemhando dzemakopu evarume ayo akakodzera kupfeka patinopinda mumitambo yakanyanyisa asi, panguva imwe chete, tinoda kuratidzika zvisina kujairika uye zvine fashoni munyika kana muguta.
Makapu evarume anozivikanwa kwazvo uye anobatsira kwazvo nhasi, nekuti iri mhando yezvinhu zvekuunganidza zvaunotadza kutenga imwe neumwe. Makoti evarume evarume ave fashoni inozivikanwa kwazvo pakati pevanoda ngowani dzevarume. Muchokwadi, makoti evarume echikadzi ndeimwe yeanotengesa zvakanyanya zvishongedzo zvemitambo painternet gore rega, nekuda kwekuita kwavo kwakawanda uye mabhenefiti avo makuru pavanenge vachiita mitambo. Pasina kupokana, kupfeka ngowani dzevanhurume kunouya zvinobatsira, kunyanya pamazuva ane zuva, zvisinei nekuti wakapfeka ngowani tsvuku yevanhurume, ngowani chena yevarume kana ngowani nhema yevarume. Uye hazvina basa zvakanyanya kana iwe ukapfeka murume anodhirowa cap, murume mesh cap, murume trucker kapu kana murume akasarudzika cap ... nekuti, pasina mutsauko, kurudziro yenyanzvi pakuita zviitiko zvekunze ndeyekugara uchipfeka murume akanaka cap yaunochengetedza.
ari ngowani dzevarume The Indian Face Ivo vanosangana nemhando yepamusoro yemhando uye vanozivikanwa nekuparadzirwa munyika dzinopfuura makumi matatu pasirese nekuda kwekukosha kwavo kusingakundike kwemari. Gore negore, sechiratidzo chemakepesi evarume, zvemitambo zvemazuva ese uye magirazi ezuva, tinozvirumbidza nekuburitsa yakawanda uye yakawanda mamodheru emakapu evarume vefashoni muchitoro chedu. Mariri muchawana mhando dzese dzemakaradhi evarume, kusanganisira ngowani chena yevanhurume, ngowani tsvuku yevarume, ngowani nhema yevarume, ngowani yemeso evarume, kapu yetiraki yevarume uye ngowani yevanodhirowa yevarume. Zvakanakisa pane zvese ndezvedu ngowani dzevanhu online chitoro iyo yekudhirowa kana kudhinda iyo yatinopa haina kufanana nechero ipi, zvakasiyana zvachose.
Yedu yekudhirowa cap modhi inopa akasiyana siyana makuru emitambo anodhinda anoenderana nezvinodiwa uye zvinonakidza zvevatambi vazhinji murudo neadrenaline, semuenzaniso, maketi evarume anomhanyisa uye macaps evarume, ari maviri emakopu edu emhando yepamusoro anotengesa zvipfeko zvevarume . Asi, sezvauri kuona, varume vedu vanodhirowa ngowani dzinosiyana pakati pemitambo yese yeunogona kufungidzira, ndosaka tine mhando dzakawanda dzemakorori evarume anowanikwa pane webhusaiti yedu, imwe yemutambo mumwe nemumwe, uye nemavara akasiyana: iwe unogona kuwana kapu Tsvuku murume, mutema chivharo murume, chena chivharo murume ... uye zvichingodaro kusvikira iwe wasvika pahuvara musanganiswa waunofarira zvakanyanya.
Kune mhando zhinji dzekopu yevarume, asi unoziva here kuti ndeipi ngowani yevanhurume inoshandiswa pasi rese?
Nguo yevarume yemarori ndeye, pasina mubvunzo, imwe yeiyo mhando dzemakapu evarume mazhinji akatengwa paInternet nhasi, uyezve anonyanya kushandiswa nevanoda mafashoni evarume. Aya mamodheru echirori chevarume kana ngowani yemitambo yevanhurume ndeimwe yezvinhu zvinonyanya kukosha zviripo pamusika, uye ndidzo dzinozivikanwa zvakanyanya nekuti ndidzo dzinoenderana nehovhosi yevanhurume, iyo ingangoita sengano semutambo pachawo.
Pakutanga, ngowani dzevarume Ivo vaifungidzirwa nevanhu vekare, vaikwanisa kugadzira zvidimbu zvehembe dzaizovabatsira kuzvivhara nekuzvidzivirira kubva kuzuva. Chikwata chevarume che baseball chakave chakakurumbira mazana amakore apfuura, uye nekuda kwekuchinjika kwayo kune akasiyana ezvekutengesa zvido, kunyanya zvevatakuri vemotokari muUnited States, chivharo chevarume cherori chakagadzirwa. Izvi zvinoreva kuti, nekuda kwekugadzirwa kwechirume che baseball cap yezvemitambo, nekufamba kwemakore kapu yevatakuri vemarori yakakurumbira yakabudawo, iyo nhasi inewo chirevo chemitambo kunyangwe iri machira eFashoni yevakadzi kapu inogona kushandiswa zvakajairika pasina dambudziko.
Muchokwadi, mazhinji eanonyanya kushandiswa evarume vefashoni makepisi ndeechokwadi evarume vema rori. Iyo yemitambo uye yakasarudzika mafashoni, akabatana mukuenderana nenyika yemafashoni, akaita kuti makodhi emitambo evarume parizvino ave nechinzvimbo chakanaka kwazvo munyika yefashoni. Kana iwe uchifarira nyika mbiri, saka kupfeka ngowani dzemitambo yevanhurume inzira yakanaka yekuita mufashoni, kwete chete kana iwe uchiita zviitiko zvemitambo asiwo uchizvipfekedza zvakasarudzika muhupenyu hwako hwezuva nezuva. Chinhu chakanaka pamusoro peichi ndechekuti, pakupera kwezuva, iwe unoisa iwo maitiro pauri, zvisinei kana uchipfeka imwe. cap nhema murume kana a chena cap murume, kana imwe chivharo chitsvuku murume... Chinhu chakakosha ndechekuti iwe unokwanisa kuratidza yako yemhando mitambo yemitambo uye hunhu hwako mune yega yega yekushandisa yaunopfeka.
Unoziva here kuti chivharo chemarori evarume vengano chinotaridzika sei?
Una trucker cap murume Iyo yechinyakare dhizaini kapu asi ine mesh kumashure. Masitayera evarume vanokwira marori, sezvatakataura, akazvarwa muma60s muUnited States, apo vatyairi vemarori vaitakura mombe, vakatanga kuashandisa. Ngoro dzemarori evarume dzakazove chikamu cheyunifomu yebasa yearori wenguva iyoyo. Rudzi urwu rwevarume mesh cap ndicho chiratidzo chake: chisimbiso chechokwadi cheiyo nyanzvi inotakura.
Muzuva redu, iyo murume trucker cap Yakave chiratidzo cheiyo fashoni yazvino isingazadzise chete basa rekukudzivirira kubva kuzuva asi zvakare inokupa iwe kubata kweakasarudzika uye anosarudzika kuzivikanwa. Kusvikira zuva ranhasi, kune vashoma vanozivikanwa munyika yemafashoni nemitambo, vasina kunge vaonekwa neyemurume mesh cap munzvimbo dzese dzemhando dzose, muzhizha nemuchando, uye vasina kutorwa nepaparazzi.
Iyo pfungwa yeakafara visor yeiyo ngowani dzevarume kukudzivirira kubva kuzuva. Vazhinji vatambi vekunakidzwa uye vanoda mitambo yakanyanyisa sevamhanyi, mabhasikoro kana vanokwira vanopfeka zvivharo zvemitambo zvevarume zvakanyanya, nekuti zvinovabatsira zvakanyanya kuzvidzivirira kubva kune mwenje wakawandisa uye mwaranzi yezuva pamberi, mushure kana panguva yechiito, sezvo vari kazhinji yakanyanya kujekerwa nemwaranzi yezuva. Rudzi rwemumhanyi harubve pamba pasina murume wake kapu yekumhanya kana yevarume bhasikoro cap, sezvazvingave zviri. Ndosaka zvichikosha kuti uwane zvaunogona kuverenga mhando dzemakapu evarume: kudzivirira yako performance mune chero yemitambo yekutandarira yaunokudziridza iwe, nekudaro uchidzivirira zvingangodzokera shure zvinokonzerwa nezuva.
Panyaya iyi, hazvina basa kana ukapfeka ngowani yemurume, ngowani yebaseball, kana kapu yevanodhirowa ... Nekudaro, nei uchitinyengera, kana vaine dhirowa inotonhorera zviri nani! Uye chokwadi ndechekuti makapeti ari kumberi ane nzvimbo yakanaka yekuwedzera kudhirowa, logo, dhizaini, makara uye zvigamba zvinobvumidza avo vanopfeka makapeti evarori evarume kuti vazvigadzikise nemaitiro avo. Ichokwadi kuti kapu yevarume inozadzisa basa rekushongedza uye basa rekudzivirira, asi, kupfuura izvo, makadhi ekudhirowa evarume akakosha kupa vatambi mukana wekuratidza kuda kwavo zvemitambo, nezvimedu zvine dhizaini dhizaini senge idhirowa yevarume machipisi aunowana pane yedu webhusaiti ... iwe unonzwa kuti iwe uri kupfeka zvakasarudzika makepi evarume zvinoenderana nechido chako uye kunzwa kwacho kunenge kwakasarudzika.
La ngowani yemitambo yevarume iyo iwe yaunowana pane yedu webhusaiti inokuchengeta iwe uri mufashoni mune yakasarudzika nzira, uku ichikudzivirira iwe kubva kune ane hukasha mwaranzi yezuva. Kune zvimwe uye zvinowedzera zvidzidzo zvinotirangaridza kuti mwaranzi yezuva inokuvadza sei paganda redu uye pakuona kwedu. Uye ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru nei tichifanira kugara tichipfeka ngowani dzevarume. Iyo inochinja-chinja, inobatsira uye ine fashoni mitambo yekushandisa iyo inova zvakare nzira yakakwana yekuratidza kwedu pachedu zvatinofarira.Sarudza iyo yeume kapu modhi iwe yaunonyanya kufarira mune yedu ngowani dzevanhu online chitoro, uye ratidza maitiro ako nehunhu nekugadzira ako anotevera maadviriro!
VAKADZI VEMUDZIMAI WEMAHARA WEMAHARA
La ngowani yemukadzi Yakave imwe yeanonyanya kubatsira mafashoni accessories mumakore achangopfuura nekuda kwezvikonzero zvakawanda. Kwete chete nekuti zvinobatsira vasikana mu "mazuva akashata ebvudzi", asi nekuti zvechokwadi ngowani dzevakadzi dzakaratidza kuti dzakakosha kuzvitarisira patinobuda munzira, kunyanya patinodzidzira mitambo yekunze uye takatarisana nezuva. mwaranzi.
ari ngowani dzemitambo yevakadzi Ivo vari, kutaura zvazviri, zvimwe zvemijaho yemitambo mbichana izvo izvozvi zvakatengwa zvakanyanya gore rega rega painternet. Isu tinoziva kuti mhando dzakasiyana dzemakepeti evakadzi mubatsiri anobatsira, asi pasina kupokana, ngowani dzemitambo dzevakadzi dzavewo chinhu chisingarambike chemafashoni, kunyanya mumitambo-yakasarudzika maitiro uye mutambo. Muchokwadi, mamwe eanonyanya kufarirwa evakadzi emitambo ngowani maketi emabhasikoro evakadzi uye ngowani dzekumhanyisa dzevakadzi, mitambo inozivikanwa kwazvo muSpain nepasirese, iyo inofanirwa kugara ichiitwa ichidzivirirwa kubva kune ultraviolet mwenje. Mune ino kesi, hazvina basa kana iwe ukapfeka ngowani yemukadzi mutema, ngowani tsvuku yemukadzi, ngowani chena yemukadzi, ngowani yemesesi, ngowani yevakadzi yebaseball kana ngowani yerori yemukadzi… Chinhu chakakosha ndechekuti iwe unokwanisa kuchinjisa chero eaya marudzi eaya makapu evakadzi kune rako zuva nezuva, uye siya wakachengetedzwa kubva kumwaranzi yezuva.
Iyi bhenefiti inogona kupihwa kwauri, semuenzaniso, na Vakadzi marori ngowani. Kuti upinde muchirevo, maitiro evakadzi vemarori kapu kana echikadzi mesh caps ndeyeti retro nekuti mabviro ekorori kapu yakadzokera kuma60's. Panguva iyoyo, varimi venguva iyoyo vakatora mukana wemakepesi evarori vaipa zvigadzirwa zvavo kushambadza mavari. Kubva ipapo, chikamu chepamberi ichi chave kushandiswa kuisa madhirowa uye zvigamba zvinowedzera ruzivo kune ngowani yemitambo yevakadzi, imwe yakasarudzika, yakasarudzika uye yakasarudzika yekubata zvinoenderana neyako mitambo yemitambo, zvishuwo zvako uye nehupenyu hwako hwemitambo.
Unoziva here kuti inoratidzika sei iyo ngano yevakadzi yerori kapu inotaridzika?
Vakadzi vemarori makepu vane zvinhu zvakafanana nefuro rabha kumberi, kazhinji nechipenga chine dhizaini yakasarudzika, sezvinoitika kumakapu emadzimai emitambo atinopa muchitoro chedu chepamhepo. Vakadzi vanodhirowa ngowani rudzi rwechikadzi chivharo chakagadzirwa nechiratidzo chakakosha kana kudhirowa chinokwanisa kuratidza pasirese maitiro nemahunhu ako pasina chikonzero chekutaura zvakawanda. Semuenzaniso, kana ichi chinodhirowa pamukadzi wako wemitambo chivharo chinoratidza musikana achimhanya, saka kapu yako ichave yakakodzera mukwanisi wekuratidza nyika kuda kwako mutambo uyu. Kupfeka ngowani yekumhanyisa yevakadzi kana ngowani yemabhasikoro evakadzi, zvinoenderana nechido chako, zvinoita kuti zvionekwe nenyika kuti uri mudiwa wemitambo, uye hapazove nemubvunzo kuti chikamu chemuitiro wako nehunhu hwako.
La trucker cap mukadzi Icho, pasina kupokana, imwe yeakakurumbira zvipfeko zvemitambo munyika. Iyo ine jira rinofananidza gridhi ine chinogadziriswa chinobatidzwa, icho chinobvumira musana wemusoro kuti ubude kunze uchidzivirira kuunganidzwa kwedikita, ichipa imwe inofadza kwazvo mhepo yazvino. Ndokusaka, pazviitiko zvakawanda, vakadzi marori makepisi anonziwo echikadzi mesh caps, zvisinei nekuti ndeapi mavara. Pane dzimwe nguva unogona kupfeka ngowani dzvuku dzevakadzi, ngowani nhema dzevakadzi kana machena machena evakadzi uye, zvisinei neruvara rwavangave narwo, chero ripi zvaro rinozotorwa semukadzi kombi yetrucker kana iine hunhu hwataurwa pamusoro. Hunhu hwekombi yemarori evakadzi, semuenzaniso, akasiyana zvakanyanya nehunhu hwevakadzi baseball cap. Vakadzi baseball cap inogadzirwa nemucheka wakarukwa usina mesh, ndosaka vasina kuvhiringidzika nevakadzi mesh caps. Nekudaro, ngowani dzevakadzi dze baseball dzinogona zvakare kuve dzakasiyana mavara: inogona kuve ngowani tsvuku yemukadzi, kana ngowani nhema yemukadzi, kana ngowani chena yemukadzi uye zvakare kutorwa semukadzi. baseball cap mukadzi.
Asi, pamhando dzese dzemakapu evakadzi aripo, makoti emitambo evakadzi ndiwo akanyanya kusimba, akasununguka, asingagone uye ane fashoni izvo zvaunogona kusarudza. Ndosaka tichifunga kuti zvine hungwaru kutenga makapu emitambo evakadzi kana iwe uchiita zvekutenga paInternet.
Marori evakadzi anopinda mukati The Indian Face ivo vakasarudzika uye havakundiki!
La mukadzi mutakuri wemotokari yanga ichipa fashoni yemumadhorobha uye mbatya dzemitambo chimwe chezvinhu zvinonyanya kubatsira kunze uko kwemakumi emakore. Kwatiri mu The Indian FaceTinoda kuve chikamu cheiyi mitambo yemitambo uye kugona kupa vatengi vedu sarudzo dzakawanda dzevakadzi vefashoni nguwani, vane mavara akasiyana uye mapatani. Tine makore anopfuura gumi nemashanu ezviitiko kugadzira vakadzi vanomhanya ngowani, vakadzi mabhasikoro makepu uye vakadzi emitambo makepisi anomutsa akawanda maitiro uye nhabvu mitambo.
ari fashoni nguwani vakadzi iyo yatinopa muchitoro chedu yakanaka kuti ishandiswe panze asi zvakare zvinotaridza kushamisa indoors. Muchokwadi, zvakakurumbira kwazvo nhasi kupfeka ngowani dzemitambo dzevakadzi, kunyangwe kana iwe uchifanira kuzvidzivirira kubva kuzuva. Izvo hazvina basa zvakanyanya manyorerwo kana vara ravanaro: inogona kunge iri ngowani yemukadzi mutema, ngowani chena yemukadzi, ngowani tsvuku yemukadzi, ngowani yekudhirowa yemukadzi, ngowani yemesesi yemukadzi senge iwo marori emhando. Iyo inogona zvakare kuve yakasarudzika kapu yevakadzi vane mutambo wemitambo, kapi inomhanya yevakadzi kana kapi yebhasikoro yevakadzi kana iwe uchidzidzira iyi kana mimwe mitambo ... Iwe unoisa chimiro neunyanzvi hwako!
Mhando dzakasiyana dzemakapu evakadzi dzinotaura zvakawanda nezvehunhu hwako uye chimiro, uye nekuda kweichi chikonzero, ivo vanove vanozivikanwa mukurumbira mumakore achangopfuura kutenderera pasirese. Kaputi tsvuku yemukadzi kumusana kana parutivi inogona kukuita kuti utaridzike, nepo ngowani nhema yemukadzi wako kana ngowani chena yemukadzi wako kumberi inogona kuratidza kukura uye kusimba. Iko hakuna chipfeko chakakwana kana chipfeko, asi zvirokwazvo chimwe chezvakanaka zvekupfeka echikadzi mafashoni makapu ndechekuti kugadzikana kwavo kunoenderana kwazvo nemhando dzakasiyana dzakasiyana, dzemadhorobha, dzemitambo uye kunyangwe mamwe masitaira ane mwero. Iwe ngowani yemukadzi ichataura chimwe chinhu chinonakidza pamusoro pako uye chiite kuti utaridze wakanaka panguva imwe chete!